Gorayo Heeryaysan! – Qore: Mukhtaar-Biite | Voice Of Somalia
Diinteenna suubban waxa ay dhiirri gelisay wax akhriska iyo qorista. Farriintii kowaad ee soo gaadha nebigeenii Muxammed (NNKH) waxa ay ahayd ”wax akhri”. Taasina waxa ay caddaynaysaa mudnaanta ay diinta islaamku siisay in la barto aqoonta. Sidoo kale qur’aanka waxa aad ku arkaysaa Alle -sarree oo korree- oo ku dhaaranaya qalinmaanta iyo buugaagta.
Magaalada Hargaysa sannad walba waxa lagu qabtaa ‘Carwada Bandhigga Bugaagta oo uu soo agaasimo Jaamac Muuse Jaamac; mulkiilaha “Xarunta Dhaqanka ee Hargaysa’’
Dibadda ula soo baxa.
Soomaaliduna waxay ku maahmaahdaa “Walle karintan haddaan laga guurin, goroyo heeryeysanna way iman”.
Barnaamijkan WoW ayaa waxa aasaastay gabadh u dhalatay dalka Ingiriiska oo la yidhaahdo Jude Kelly. Jude sidoo kale waa agaasimaha fanka ee xarunta South Bank ee Ingiriiska. Gabadhan ayaa ka mid ahayd dadka martida ah ee sida cad cad uga dhex muuqday Bandhigga Buugaagta ee sannadkan. Haddaba aan is waydiino, waa tuma Jude Kelly? Maxay ahayd u jeeddada ay Hargaysa u timid?
Jude aasaasaha WoW ahna agaasimaha xarunta fanka ee South Bank, waa gabadh u ololaysa guurka dadka jinsiga (homosexual) ah, sida nin iyo nin amma gabadh iyo gabadh. Waxa ay muruq, maal iyo maskaxba galisaa, sidii ay dumar u fidnayn lahayd ee ay u suuldaarayn lahayd. Qoraallo lagu baahiyey warbaahinta standard ee dalka Ingiriiska ayaa warbixintan Jude siisay aan kasoo guuriey:
Guurka lammaanaha isku jinsiga ah aad bay qalbigeeda ugu weyn yihiin. Waxa ay sheegtay in ay u han weyn tahay inan teeda 27 jirka ah ee Caroline oo gabayaa ahi, inay guursan doonto gabadh kale dhowaan.” Iyada oo warbixintu sii wadda arrintaas waxa ay tiri: “Kelly waxa ay ka furaysaa xarunteeda South Bank, goob ay isku aroostaan dumarka is guursada iyo ragga isguursadaa.”
Jude waxa si fiican loogu soo dhaweeyey magaalada Hargaysa, oo ay khudbado ka jeedisay Bandhigga Buugaagta halkaasi oo aad loogu wayneeyey. Dabadeedna intaa kuma ay joogin ee waxa ay kulanno gaar ah la qaadatay hablihii reer Hargeysa oo ay gaadhsiisay fikraddii foosha xumayd ee ay wadday.
Sidoo kale waxay ay gabadhani la kulantay ururrada bulshada taasi oo keeni karta dhibaato ba’an. Waxaa suurto gal ah haddii gabadhani xidhiidh la samayso ururrada bulshada ee Somaliland in ay saamayn ku yeelan karto hawlaha ururrada Somaliland looga bartay.
Waxa suurto gal ah in ay sadhayso oo ka dhaadhiciso fikirkan liwaadka ah ee ay waddo, iyada oo usoo maraysa meelaha ay u liitaan ee ay u nugul yihiin ururada bulshadu sida mashaariic, koorsooyin dibadda ah, maal-gelin, tobabarro…..ikk.
Waxaabad mooddaa inuu Sayidku ka hadlayey waxa maanta Hargaysa ka dhacaya ee ay ka waddo shaydaamadda Jude. Maalintaas uu Sayidku ka hadlayey may jirin gaal liwaad ka waday gayiga Soomaaliyeed balse waxa uu sheegay in uu saadanbe oo maanta ah lasoo bixi doono waxaan laga filanayn.
Akhriste gabadhan isku sheegtay gadhwadeenka Haweenka Dunida, ma u malaynaysaa in aynu isku duni nahay? Isku haweenna ka waramayno? Waa kala maan, dunida ay ka sheekaynayso ee reer Luud iyo dadka Soomaaliyeed ee 100% islaamka ah.
Gabadhan shaydaammadda ah waxa ay ka soo jidaashay carri fog, iyada oo ay innoogu timid malkadeenna si ay inoo siiso sun ay adag tahay ka soo kabashadeedu. Waa suntii lagu halaagay reer Luud markii ay dhadhamiyeen. Waxa la yidhi, geed baa yidhi: “Gudinyahay imaad goyseen, haddaan badhkay kugu jirin” Jude Hargeysa iskamay iman ee waxa u fududeeyey ninka sheegtay inuu yahay guddoomiyaha Bandhigga Buugaagta oo if iyo aakhiroba lagala xisaabtami doono falkaas foosha xun.
Hablaha reer Hargeysa mar ayaa la dagay, se mar labaad la dagi maayo. Qofka Muslimka ahna god laba jeer lagama wada qaniino. Bandhigga Buugaagta iyo xarunta dhaqanka ee Hargaysana waxa ay sannadka soo bandhigeen afkaarta iyo mabaadi’da qaldan ee ay ka soo qaadaan qaaradaha fogfog.
Dawladda Somaliland oo ay dadkeedu u doorteen ilaalinta diintooda iyo naftooda ayaad mooddaa inaanay kaba war qabin arrintan dhabarjabka ku ah mustaqbalka bulshada reer Somaliland.
Dhallinyarada reer Hargaysa waa ay ku ammaanayaa in ay mudanyihiin sida ay uga falceliyeen arrintan. Waxa aan ogaaday inay Hargaysa joogaan dhallinyaro caqli badan, hawlkar ah, xor ah, ku sifaysan akhlaaq wanaagsan, fikiraya, doonayana inay samaystaan mustaqbal fiican. Dhallinyaro qanacday khayr ma leh ee waxa barakaysan oo burjigoodu sarreeyaa dhallinyaro hammigeedu sarreeyo.
Maanta laga bilaabo barbarkay ka baxdaawaa bakayle qaleen. Dhammaanteenna waxa aynu nahay masuuliyiin, qof kastaana haddii uu ilaaliyo qaybtiisa waxa hubaal ah in aan dhanna, waraabe danbe inooga soo dhacayn. Intaasina ha inoo ahaato cashar aynnu kaga gaashaamanno aragtiyaha dusduska ah ee la inoogu soo gudbinayo sida hoos ahaanta ah.
Mukhtaar Cabdi “Biite”